नायिकासँग मेरो जति अफेयर कसैको भएन होलाः किशोर नेपाल - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य काठमाडौं १८ फागुन
‘कसैलाई नायिकासँग बसेर कफी पिएँ भने बेलुका श्रीमतीले के भन्लिन् भन्ने डर हुन्छ। कसैलाई नायिकाको छेउमा बस्दा प्रेमिकाले के भन्लिन् भन्ने डर लाग्छ। मलाई कुनै डरसर लाग्दैन।’
वरिष्ठ पत्रकार, लेखक किशोर नेपाल नायिकासँग कफी गफका सौखिन हुन्। उनले नेपालका प्राय नायिकादेखि बलिउडकी माधुरी दीक्षितसँग कफी पिएका छन्। नायिकासँग किशोरको कफी मोह आज पनि उत्तिकै छ। केही दिनअघि मात्रै नायिका केकी अधिकारीसँग कफी गफ गरेका किशोर भन्छन्, ‘अब प्रियंका चोपडासँग कफी पिउन मन छ।’
के बजारमा हल्ला चलेजस्तो किशोर कफी गफ मार्फत नायिकासँग अफेयर पनि चलाउँछन्? काठमाडौंको थापाथलीस्थित ब्लुबर्ड कम्प्लेक्सको हिमालयन जाभामा यसपाली किशोर नेपालले नेपालखबरसँग यसरी कफी गफ मारेः
तपाईं नायिकाहरुसँग कफी पिउन खुब रुचाउनुहुन्छ?
म मात्र होइन, सबै रुचाउँछन्। नायिकासँग कफी पिउन नरुचाउने को होला?
अरुभन्दा तपाईं यसमा विशेष रुची राख्नुहुन्छ रे ...
कसैलाई नायिकाको छेउमै पर्न डर लाग्छ। कसैलाई नायिकासँग बसेर कफी पिएँ भने बेलुका श्रीमतीले के भन्लिन् भन्ने डर हुन्छ। कसैलाई नायिकाको छेउमा बस्दा प्रेमिकाले के भन्लिन् भन्ने डर लाग्छ। मलाई कुनै डरसर लाग्दैन।
म नायिकासँग बसेर मज्जाले कफी पिउँछु, पिउन चाहन्छु र पिउन पाइराखुँ भन्ने छ। म मात्र होइन, नायिकाहरु पनि मसँग बसेर कफी पिउन मन पराउँछन्।
कफी पिउँदा नायिका चाहिने किन?
म नायिकासँग कफी पिउन मन पराउँछु। कफी सपमा नायिका आएर छेउमा बस्दिइन भने म मख्ख पर्छु। अतिरिक्त फाइदा भयो नि त।
नायिका, गायिका वा मोडेलहरूसँग कफी गफ चाहिँ कस्तो हुन्छ?
सिनेमा अथवा नाटकको कुरा हुन्छ। गायिकासँग बसेको छु भने गीतको कुरा हुन्छ। गीतको तारिफ गरिदिन्छु। राम्रो नलागे पनि मान्छेको अगाडि त तारिफ गरिदिनुपर्यो नि। कहिलेकाहिँ आफुलाई राम्रो नलाग्दा पनि राम्रो भन्नुपर्छ।
व्यक्तिगत जीवनका कुरा हुँदैनन्?
त्यस्तो खासै केही हुँदैन। आफुले सोध्ने कुरा पनि हुँदैन र उनीहरुले पनि खासै गर्दैनन्। मेरो ग्रह उनीहरुले सेयर गर्ने खालको नपरेर पनि होला। मलाई भनेर पनि मैले केही गर्ने होइन। त्यसैले रमाइला कुरा मात्र हुन्छन्।
कफी गफका लागि प्राय किशोरी नायिका वा गायिका छनोट गर्नुहुन्छ। छनोटका मापदण्ड के हुन्?
मैले थरिथरीका कलाकारसँग कुरा गरेको छु। नेपालकी टप नायिका करिष्मा मानन्धरदेखि पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका केकी अधिकारीसम्म। सबैसँग मैले कुरा गरेको छु।
सबैभन्दा स्वादिलो गफ चाहिँ कुन नायिकासँग भयो?
त्यो त मुडअनुसार हुन्छ। रमाइलो कुरा गर्ने मुड छ भने त्यसैअनुसार हुन्छ। त्यस्तै हो।
नायिकासँग बसेर कफी पिएको प्रशंग किन मिडियामार्फत बाहिर ल्याउनुहुन्छ?
मलाई लेख्न मज्जा आउँछ। आनन्द आउँछ। मेरो पहिलो सन्तुष्टी नै लेख्नु हो। त्यसैले।
कालकार चाहिँ तपाईंसँग कफी पिउन कत्तिको चाहन्छन्?
पहिले अलि धेरै हुन्थे। अहिले अवस्था अलि बिग्रिएको छ। कफी हाउसहरु धेरै खुलेका छन्, बस्ती पनि फैलिएको छ। कुनै नायिकालाई एकाबिहानै मसँग बसेर कफी पिउन मन लाग्यो भने तिनले मलाई बोलाउन सक्दिनन्। फेरि मलाई जहाँ पायो त्यहिँको कफी हाउसमा बोलाएर के फाइदा? अनि उनीहरु यता आउन पनि गाह्रो हुन्छ। यस्तै हो।
हालसम्म को को नायिकासँग कफी पिउनु भयो?
(त्यस्तो सूची) छैन। प्राय सबैसँग पिएको छु। नायिका मात्र नभएर गायिका र मोडलसँग पनि पिएको छु।
जीवनबारे उनीहरुको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ?
नायिकाहरु जीवनको विश्लेषण गर्न निकै सिपालु हुन्छन्। तर, निस्कर्ष निकाल्न सक्दैनन्।
त्यो तपाईंले निकालिदिनुहुन्छ?
उनीहरुको जीवनको निस्कर्ष म कसरी निकालुँ यार (हाँस्दै)।
तपाईंसँग सल्लाह–सुझाव पनि माग्छन् होला नि?
मलाई दिन्छन् सुझाव। तपाईं अलि अर्गनाइज हुनुपर्यो। यो हुनुपर्यो, त्यो हुनुपर्यो भन्छन्। त्यहि त हो नि।
तपाईंले चाहिँ दिनुहुन्न?
के दिनु, राम्रै लुगा लगाइराख्या हुन्छन्। राम्रै खाइराख्या हुन्छन्।
भेट्नुअघि नायिकाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ?
अलि प्रचलित छन् भने थाहा भइहाल्छ। नत्र साथीभाइसँग सोध्नुपर्छ। रंगमंचका छन् भने अनुप बराललगायतलाई सोध्छु। फिल्म निर्देशकलाई नै चाहिँ सोधेको छैन।
यस्तो मामलामा गज्जबका मान्छे राजेश हमाल हुन्। को मानिसले के मन पराउँछ र कसलाई के मनपर्छ भन्ने टिपेर राख्यो भने रोज्न पाइयो नि।
जुन दिन कफी गफ गर्ने मुड हुन्छ र नायिका पाउनुहुन्न, त्यो बेला तड्पिनु हुन्छ?
त्यस्तो त हुँदैन। जसलाई बोलाए पनि भयो नि। सबैलाई थाहा छ, जागिर गर्दा मैले धेरै केटीहरुलाई हायर गरेको छु। कहिलेकाहिँ उनीहरुसँग बसेर कफी पिए पनि भयो।
प्राय चर्चामा रहेका, किशोरी नायिकासँग कफी पिउनुहुन्छ। उनीहरुको चाहना चाहिँ के हुन्छ?
पब्लिसिटी नै हो, योसँग कुरा गर्न पायो, कफी पिउन पायो भने केही लेखिदिन्छ कि भन्ने। यसले मिडियामा, फेसबुकमा, ट्वीटरमा या इन्स्टाग्राममा केही लेखिदियो भने केही हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको भ्रम हो। मैले लेखेर केही हुनेवाला छैन।
कतिपय ट्रेन्डहरुको बारेमा पनि जानकारी लिन चाहन्छन्। उनीहरु बौद्धिक सुरक्षा चाहन्छन्। त्यसमा पनि मैले गाइडेन्स दिनुपर्छ।
पछिल्लो समय (दुई महिनाअघि) मैले करिष्मा मानन्धरसँग कफी गफ गरेँ। सांग्रिला होटलमा उनीहरुका आमाछोरी नै आएका थिए। राम्रो कुरा भयो। करिष्मा अहिले पढ्दै छिन्, यस विषयमा पनि कुरा भयो र उनले आफु अभिनयमा फर्कने कुरा पनि गरिन्। उनीहरुसँगको गफ मैले कन्तिपुरको साप्ताहिकको मेरो कोलममा पनि लेखेँ।
भनेपछि तपाईंको कफी गफ एउटा लेखक र नायिकाबीचको संवाद मात्र हो त?
त्यो तपाईंले संकेत गर्नुभएको कुरातिर मैले बोल्ने बेला भएको छैन अहिले। त्यो पनि बोल्ने बेला आउला नि।
नायिकाहरूसँग तपाईंको अफेयर त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि?
नायिकासँग मेरो जति अफेयर त कसैको पनि भएन। म जति राजदूत पनि कोही भएन होला।
हालसम्म तपाईंको कति जनासँग अफेयर भयो होला?
कुनै समय खाताखात हुन्थे। पछि आफैले फिल्टर गर्दै गएँ। यस्तै हो।
एकछिन समय लिएर यसो नम्बर सम्झनुस् न, कति जनासँग अफेयर भयो अहिलेसम्म।
हिजो भनेको भए त म सम्झने प्रयास गर्थेँ होला। सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध त भयो होला थुप्रैसँग। त्यतिबेलाका नायिका सर्मिला मल्लहरुसँग पनि मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो। उनीसँग त मैले नयाँ पत्रिकाका लागि एउटा मोडलिङ पनि गरेको थिएँ। सबै कहाँ याद हुन्छ र भन्नासाथ। बिर्सियो नि।
कफी हाउसबाट सुरु हुने यात्रा डेटिङ स्पटसम्म पनि पुग्छ?
डेटिङ स्पटमा त म जान्नँ।
तपाईंले नायिकासँग कफी पिउँदा तपाईंप्रति जल्नेहरु पनि थुप्रै होलान नि?
छन् होला। जल्नेहरु जलिरहन्छन्। के नै गर्न सकिन्छ र। तर, मसँग आएर ‘तैँले किन फलानोसँग बसेर कफी खाइस्’ भनेर सोध्ने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन्। पछाडि बसेर गरेको कुराको म वास्तै गर्दिनँ।
कफी गफमा पुराना र नयाँ नायिकामा के फरक भेट्नु हुन्छ?
त्यतिबेला क्वालिटीका कुरा हुन्थे। अहिले त छासछुस कुरा मात्र हुन्छ। सिनेमाको बारेमा पनि मैले लामो समयपछि भर्खरै केकी अधिकारीसँग कुरा गरेको हुँ। उसँग भने क्वालिटीको कुरा भयो।
व्यक्तिगत रुपमा केकी कस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
एकदमै इम्प्रेसिभ छ केकी। पढेलेखेको र बुझेको पनि। उसको बुबा मेरो साथी हो। साथीको छोरीसँग बसेर गफ गर्दा मज्जा आउँछ। ऊ ग्ल्यामरस पनि छ। केकीको सिनेमा खासै हिट भएको छैन भनिन्छ। मैले चाहिँ के देखेँ भने उसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने डाइरेक्टर नै छैनन्।
घामपानीमा केकीको राम्रो अभिनय छ, पैसा पनि कमायो। तर, उसको क्षमताअनुसार उसलाई काम लगाउन सक्ने निर्देशक नेपालमा मैले देखेको छैन।
कफी पिउँदा एक जनासँग कति समयसम्म गफ गर्नुहुन्छ?
त्यो मुडमा भर पर्छ। कामको दबाब भएको बेला धेरै समय खर्च गर्दिनँ। अघिपछि त खासै त्यस्तो हुँदैन।
अहिलेसम्मको रेकर्ड चाहिँ कति छ?
३ घण्टासम्म होला। प्राय सबैसँग यसकै वरिपरी समय बिताउने गरेको छु। तर, यसमा स्थानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। काठमाडौंका केही रेष्टुराँबाहेक गफ गर्ने वातावरण भएका स्थान कमै छन्। नत्र त ४ घण्टा बिताउन मज्जाले सकिन्छ। अर्को कुरा गफ गर्ने विषय पनि हुनुपर्यो। गफकै लागि गफ गर्नु पनि भएन नि। विषय भए त मज्जाले गरिन्छ।
त्यति लामो समय के कस्ता गफ गर्नुहुन्छ, जनता जान्न चाहन्छन्।
जनता जान्न चाहन्छ भने त्यहि हो, कहिले भ्यालुका कुरा हुन्छन्, कहिले सामान्य परिवेशका। त्यस्तो अरुले सोचेजस्तो विचित्र खालको वात पनि हुँदैन।
नायिकाको तारिफ गर्नुहुन्न?
सामान्य। तपाईं राम्री देखिनु भएको छ भनिदिन्छु।
कतिपय गफ अविस्मरणीय, आनन्ददायी र प्रिय हुन्छन्। त्यस्तो कुनै स्मरण छ?
त्यस्तो गफ गर्ने रंगढंग खासै छैन मेरो। एक–दुई छन्। मनिषा कोइरालासँग कुरा गर्दा मैले त्यो पाएको छु। क्यान्सर अगाडिको मनिषासँग मैले कुरा गरेको छु, क्यान्सरपछिको मनिषासँग कुरा गरेको छैन। समय लिने सोचेको छु। केही छन्, त्यस्तो खासै छैनन्।
कफी गफमा सिने क्षेत्रलाई बुझ्ने प्रयास कत्तिको गर्नुहुन्छ?
धेरै गरेको छु। तर, मैले लेख्ने राम्रो प्लेट फर्म पाइनँ। नत्र मलाई सिने क्षेत्र बारेमा लेख्ने धेरै चाहना थियो। अझ पनि अपेक्षा गरौँ केही त पक्कै आउँछ। मैले कतै छापे पनि नछापे पनि लेख्न चाहिँ लेखिराखेको हुन्छु। छ, मसँग धेरै छ।
स्त्री, सोमरस र द्रब्यबिना किशोर नेपाल अपूर्ण छ भन्नेहरु पनि छन्। वास्तविकता के हो?
यो एउटा मिथ मात्र हो। जुन हिसाबले मेरो बारेमा चर्चा चलाइन्छ, त्यसरी म बाँचेको भए यतिबेलासम्म म तपाईंको अगाडि हुने थिइनँ होला। सब हल्ला मात्र हो।
राम्रा चीजहरुलाई मन पराउनु भनेको कुनै खराबी पनि होइन। राम्रा अभिनेत्रीलाई मन पराउनु, उनीहरुसँग अभिनय, गीत, गजल, गायनका कलात्मक कुरा गर्नु राम्रै हो नि।
अमेरिका गएका बेला प्राय न्यूयोर्कको हार्डरक क्याफेमा जान छुटाउनु हुँदैन रे, त्यो क्याफेसँग तपाईंको सम्बन्ध के हो?
त्यो केही होइन। सन् १९८३ मा न्यूयोर्क गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदा हार्डरक क्याफेमा गएर बसियो। अलिअलि रमाइलो पनि गरियो। मलाई मन पर्यो। त्यसपछि न्यूयोर्क गएका बेला त्यहाँ गएर बस्यो भने मोक्ष प्राप्त गरेको जस्तो हुन्छ।
हार्डरकमा हलिउड अभिनेत्रीसँग पनि कफी पिउनुभयो कि?
अभिनेत्रीसँग त होइन, निर्देशकहरुसँग चाहिँ कफी गफ गरेको छु। तर, हार्डरक मै चाहिँ होइन। न्यूयोर्क टाइम्स वरिपरी कफी हाउसहरु छन्। त्यहाँ बसेर निर्देशकहरुसँग हलिउड अभिनेत्रीबारे कुरा भने भएको छ।
के–कस्ता कुरा गर्नुभएको छ?
उनीहरुका लागि हाम्रो देश अचम्मको छ। ढोका–ढोकामा मूर्ति पाइने, हराउने खालका खोँच, यहाँका मानिसको धर्म–संस्कृति र जीवनशैली, पहाड र तराईमा रहेको विविधता। त्यो उनीहरुलाई मन पर्छ। हाम्रोमा सन्तोष छैन तर, चाहना पनि छैन। उनीहरुमा भने सन्तोष छ, चाहना पनि थुप्रै छ। उनीहरु यहाँ आएपछि यस्ता विषयमा थुप्रै डकुमेन्ट्री बन्छन्।
हलिउड अभिनेत्रीलाई चाहिँ कफी अफर गर्नुभएन?
मैले अहिलेसम्म गरेको छैन।
बलिउड अभिनेत्रीलाई नि?
गरेको छु त्यो त। भारत गएका बेला मैले माधुरी दिक्षितलाई कफी पिउन अफर गरेको थिएँ। समय दिइन र आइन।
गफ पनि रमाइलै भयो होला।
खास त्यस्तो केही भएन। धेरै त बिर्सिएँ पनि। जे होस् अलिअलि गफ गर्दै सँगै बसेर कफी पिइयो।
दिनमा कति कप कफी पिउनुहुन्छ?
बिहानै घरमा एक कप पिउँछु, आफैले बनाएर। बाहिर निस्किएपछि एक कप पिउँछु। फेरि ३ बजेतिर पिउँछु। काम नभएको बेला तीन कपसम्म पिउँछु। काम छ भने त ७–८ कपसम्म खाइराख्छु। नागरिक दैनिकमा सम्पादक हुँदा कफी खाएको खायै गर्थेँ।
कफी पिउनका लागि मात्र पिउनुहुन्छ या यसले कुनै नशा पनि दिन्छ?
दिनको ३–४ सय रुपैयाँ खर्च गरेर ३–४ कप कफी पिउँछु म। पिउनका लागि मात्र भए त किन पिउनु?
कहिलेदेखि पिउन थाल्नुभयो?
मैले कफी पिउन थालेको २०२७ सालदेखि नै हो। अमेरिकामा रहेको साथीले त्यहाँबाट पठाइदिन्थ्यो। मैले भारतबाट एउटा फिल्टर मगाएको थिएँ। घरमै बनाएर पिउँथें। म पहिल्यैदेखि कफीको भोगी नै हो।
के–का लागि पिउनुहुन्छ त?
मेरो त एउटा एडिक्सन पनि भइसक्यो है। गाँजा पिउनेलाई गँजेडी भनेको जस्तै म कफेडी भैसकें। कफी पिएपछि कन्फिडेन्ट बढ्छ। मज्जा आउँछ। लेख्न सकिन्छ।
पहिलोपटक कुन नायिकासँग कफी पिउनुभयो, याद छ?
त्यो त मैले बिर्सिएँ। काठमाडौं नगरपालिका जाने बाटोमा प्याराडाइज रेष्टुराँ थियो। त्यहाँ योगेशराज उपाध्याय र म जान्थौँ कफी पिउन। बिहान कफी पिउने राति रक्सी।
कुनैबेला नायिका प्रियंका कार्कीसँग कफी पिउने इच्छा ब्यक्त गर्नुभएको थियो, पूरा भयो त?
मैले उसलाई अन्तर्वार्ताका लागि आग्रह गरेको थिएँ। उसको नखरा देखेरै झोक चल्यो र मन पर्न छाड्यो। मानिसले ऊ केही हो भनेर भन्थे तर, मलाई केही लागेन। एउटा कलाकारका लागि चाहिने आधारभूत गुण भनेको बिनम्रता हो। हामी बिनम्र हुँदैनौँ भने झगडा पर्न थाल्छ। उसको स्रोता, दर्शकले उसलाई किन रेस्पोन्स गर्ने?
एकपटक नायिकाको गुदी हुँदैन भनेर विवादमा पनि आउनुभयो नि?
एउटा अन्तर्वार्तामा यिनीहरुको गुदी हुँदैन, त्यत्तिकै कराइराखेका हुन्छन् भनेको कुरा आयो। तर, मैले भनेभन्दा अलि धेरै आयो।
अब कुन नायिकासँग कफी गफ गर्ने चाह छ?
प्रियंका चोपडा, हलिउड एन्ड बलिउड बोथ। मलाई लाग्छ, अहिलेको सिनारियोमा ऊ मस्ट चार्मिङ फेस हो। अमेरिका गएँ र प्रियंकासँग भेट भयो भने मज्जै हुन्छ।
कफीका लागि आग्रह पनि गरिसक्नुभयो कि?
ऊ बलिउडमा नआउँदै गरेको थिएँ। तर, खासै चलेको थिएन त्यतिबेला। त्यस्तै भयो।
नायिकालाई कफी प्रस्ताव कसरी गर्नुहुन्छ?
उपलब्ध भए जति जम्मै माध्यमबाट गर्ने हो त्यो त।
भर्खरका नायिकासँग कफी गफ गर्दा पुस्तान्तर फिल हुँदैन?
अहिलेसम्म भएको छैन। फेरि उनीहरुले पनि यसो भनेका छैनन्। उमेरलाई त्यति महत्व दिएर हेरेको पनि छैन। मानिससँग कुरा गर्ने एउटा आकांक्षा पनि हो, यसो गर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ। जुन दिनसम्म मेरो आकांक्षा जिवित रहन्छ तबसम्म म बुढो हुँदिनँ जस्तो लाग्छ। जुनदिन मैले आफ्ना आकांक्षाहरुलाई मार्छु, त्यसबेला चाहिँ सोच्नुपर्ला।
त्यस्तो समयको कल्पना गर्नुभएको छ?
छैन। मलाई के लाग्छ भने म यत्तिकै आनन्दपूर्ण ढंगले मर्छु। हिँड्दा–हिँड्दै, लेख्दा–लेख्दै, बोल्दा–बोल्दै। यसरी रमाइलो हुन्छ। फेरि मर्छु कि भनेर धेरै चिन्ता गर्नु पनि हुँदैन। एकदिन सबै मरिन्छ।
कफीमा तपाईं नायिकाहरूसँग जति जम्नुहुन्छ, पत्रकारहरुसँग जम्नुहुन्न रे ...
जम्नेहरुसँग जम्छ। नारायण वाग्लेसँग कफीमा जम्छ। पूर्ण बस्नेतसँग जम्छ। कसमस विश्वकर्मा, राजेश केसी, सुधीर शर्मासँग कहिलेकाहिँ रक्सीमा जम्छ। तर, जोसँग जहाँ पनि जाने, हिँड्ने एक प्लेट मःम ल्याउ त भन्ने, एक क्वाटर भोड्का तानिहाल्ने चलन मेरो छैन। बसिसकेपछि अलि विशेषगरी बस्ने। द्वारिकामा बस्ने, अन्नपूर्णमा बस्ने। नत्र त जिन्दगी नै बोर हुन्छ।
कुनै समय चुरोट र रक्सी पनि खुब पिउनुभयो। रक्सी, कफी, नायिका र किशोर नेपाल एकअर्काका परिपूरक हुन्?
रक्सी त मैले छाडें, १ वर्ष भयो। त्यसैले छाडेको कुराको गफ के गर्नु। चुरोट पनि छाडेँ, त्यसको पनि के गफ गर्नु। कफी, नायिका चाहिँ छाडेको छैन। छाड्दिन पनि। यहि हो।
रक्सी छाडेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ?
स्वास्थ्यका कारणले रक्सी छाडेको हो। फेरि छाडेको भनेर चटक्कै छाडेको पनि होइन। पार्टीहरुमा गएका बेला अरुले खाइरहँदा आफूले हातमा पानी लिएर बस्दिनँ। ध्यान गर्दिनँ।
प्रकाशित १८ फागुन २०७५, शनिबार | 2019-03-02 15:34:56